IFC- Banky iraisam-pirenena: manohana ny sehatra tsy miankina aty Afrika | NewsMada
IFC- Banky iraisam-pirenena: manohana ny sehatra tsy miankina aty Afrika
Par Taratra sur 05/11/2018
Nanambara ny sampana iray ao amin’ny Banky iraisam-pirenena, IFC, fa 6,2 miliara dolara ny famatsiam-bola ho an’ny tapany atsimon’i Afrika nandritra ny taom-piasana taona 2018 ; 3,5 miliara dolara tamin’ny taom-piasana farany.
Voalohany, be indrindra mandritra ny taom-piasana iray io famatsiam-bola avy amin’ny Banky iraisam-pirenena io, hampitomboana ny fampiasam-bola ho an’ny sehatra tsy miankina. Ankoatra izay, 400 tapitrisa dolara ny fandaharanasa fampadehan-draharaha sy tolokevitra samihafa ho an’ny sehatra tsy miankina. Manampy betsaka ny orinasa madinika sy salantsalany PME aty Afrika ny IFC. Ireo tetikasa omena laharam-pahamehana : ny fotodrafitrasa, ny indostria, ny fambolena sy fiompiana, serasera sy ny teknolojia.
Nahatratra 2,9 tapitrisa dolara izany tamin’ity taona 2018 ity. Vahoaka betsaka nahita tombony avy amin’izany, toy ny famatsiana herinaratra sy ny fitsaboana. 278.000 ny olona miasa amin’ireo PME nahazo famatsiam-bola avy amin’ny IFC ireo. Na misy aza, tsy tena mbola hita tratra izany eto Madagasikara noho ny antony politika tsy misaraka amin’ny kolikoly.
Manamafy ny fiaraha-miasany amin’ny MIGA (Agence Multilatérale de Garantie des Investissements) any amin’ireo firenena sarotra ampiasam-bola, toy ny eto Madagasikara, ity sampana iray ao amin’ny Banky iraisam-pirenena ity.
« Vonona ny IFC hanampy amin’ny fampiasam-bola ataon’ny sehatra tsy miankina aty Afrika ka voaporofo marina fa hiteraka fampandrosoana. Misy ny marimaritra iraisana, satria tsy vitan’ny governemanta irery ny manao izay asa fampandrosoana izay, raha tsy eo ny fanohanana ny sehatra tsy miankina. Politikan’ny IFC mijery akaiky ireo firenena tsy ampy vola », hoy i Sergio Pimenta, filoha lefitry ny IFC aty Afrika, sy i Oumar Seydy, talem-paritry ny IFC aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika.
Faha-80 taonan’ny Mpanazava: Reny mpiahy ny minisitra Ratovoson Juliana 21/09/2021
Kitra – Amboaran’ny Caf: hifandona amin’ny Interclube Angola indray ny CFFA 21/09/2021
Tennis – BMOI Premium Challenge: mpandray anjara anjatony hiatrika ny fifaninanana 21/09/2021
Poetawebs: nahaliana ny maro ny sanganasan-dRatsimba Georges 21/09/2021